'कोरोनाको नयाँ प्रकार नेपाल भित्रिए संक्रमण र मृत्यु बढ्न सक्छ' :: Setopati
'कोरोनाको नयाँ प्रकार नेपाल भित्रिए संक्रमण र मृत्यु बढ्न सक्छ' ‘पहिले संक्रमण भएको व्यक्तिलाई पुनः संक्रमण गर्ने सम्भावना कम’
विवेक राई काठमाडौं, पुस १२
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुस १ गतेदेखि ७ गतेसम्म बेलायतबाट नेपाल आउने सबैलाई अनिवार्य 'होटल क्वारेन्टिन' मा बस्न अपिल गरेको थियो। र क्वारेन्टिन बसाइको ७ देखि १० दिनको बीचमा सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन भनिएको थियो।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी पनि नेपालमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भित्रिने जोखिम रहेको बताउँछन्।
'बढी संक्रमणशील भयो भने मृत्युदर उति नै भए पनि धेरै मानिसको मृत्यु हुनसक्छ,' उनले भने।
तर अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको नयाँ प्रजाति भित्रिएको पुष्टि भइसकेको छैन। यो पत्ता लगाउनलाई भाइरसको 'जिन सिक्वेन्सिन' गर्नुपर्छ जुन प्रविधि नेपालमा अहिले उपलब्ध छैन।
यो प्रविधिबाट भाइरसमा के-के कुरा फरक छ भनेर पत्ता लाग्छ। एक दुई वटा प्रयोगशालाले जिन सिक्वेन्सिङ गर्न सक्ने दाबी गरे पनि अहिलेसम्म त्यसमा कुनै काम भएको छैन।
युरोपमा विस्तारै फैलिएको यो भाइरस नेपाल प्रवेश गरे नियन्त्रण गर्न पहिलेभन्दा कठिनाइ हुने डा. सुवेदी बताउँछन्।
'हाम्रोमा महामारी घटेको छ/छैन त्यो थाहा छैन तर बढेको जस्तो पनि देखिँदैन। सायद कति क्षेत्रमा मानिसहरू संक्रमित भइसकेकाले पनि हुनसक्छ,' उनले भने, 'तर नयाँ प्रजातिको कोरोना आयो भने फेरि धेरै मानिस संक्रमित हुनुपर्छ।'
उनले जिन सिक्वेन्सिङ प्रविधि नेपालमा नरहेको भन्दै नेपालमा यो भाइरस रहेको/नरहेको थाहा नहुने भन्दै पिसिआर परीक्षणबाट संक्रमण पुष्टि भएकाहरू कडाइका साथ क्वारेन्टिन वा आइसोलेटन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
'परीक्षण बढाउने, ट्रेसिङ गर्ने कुरालाई व्यापक बनाउनुपर्छ जुन अहिले भएको देखिँदैन,' डा. सुवेदीले भने।
डा. सुवेदी भन्छन्, 'यो भाइरसबाट कुन देशका मानिस अछुतो छन् भनेर स्पष्ट छैन त्यसैले सबै देशबाट आउनेलाई निगरानी गर्नुपर्छ।'
तर यो नयाँ प्रजातिको कोरोनाले पहिले संक्रमण भएको व्यक्तिलाई पुनः संक्रमण गर्ने सम्भावना भने कम रहेको डा. सुवेदी बताउँछन्।
'यसबारे अध्ययनहरूले अहिले नै बताउन सकेको छैन तर पुरानो भाइरसहरूको अध्ययनबाट तिनीहरूको व्यवहार हेर्दा थोरै जेनेटी परिवर्तनले नै फेरि नयाँ संक्रमण हुन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसैले नयाँ उपप्रजातिबाट पहिले संक्रमित भएकालाई पुनः संक्रमण हुने सम्भावना कम हुन्छ।'
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १२, २०७७, ०६:२७:००